महिला संघको क्षेत्रीय समिति र किसान संघको जिल्ला समिति चयन | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
महिला संघको क्षेत्रीय समिति र किसान संघको जिल्ला समिति चयन
Published On : २५ कार्तिक २०७६, सोमबार ०९:१५
नेपाली कांग्रेसको भगिनी संस्था नेपाल महिला संघको क्षेत्र नं. १ को क्षेत्रीय कार्यसमिति चयन गरिएको छ ।
फूलमाया गुरुङको सभापतित्वमा १७ सदस्यीय क्षेत्रीय समिति चयन गरिएको हो । नयाँ कार्यसमितिको सहसभापतिमा सीता पाण्डे, सचीवमा सरिता भट्ट र कोषाध्यक्षमा लक्ष्मी धमला चयन भएका पार्टीका सहसचिव नारायण लामिछानेले जानकारी दिए ।
त्यस्तै काङ्ग्रेसको जनवर्गीय संगठन नेपाल किसान संघको जिल्ला समिति पुनर्गठन गरिएको छ । बाबुदेव भट्टको सभापतित्व मा गठित समितिको उपसभापति मा खुनप्रसाद रेग्मी, महिला उपसभापतिमा गोमा ढकाल, सचीवमा बलहादुर धिताल र कोषाध्यक्षमा सगुन पन्त चयन भएका छन् । त्यस्तै सदस्यहरुमा धनबहादुर गुरुङ र मानबहादुर पाण्डे चयन भएका सहसचिव लामिछानेले जानकारी दिए ।
प्रहरी कार्यालयमा एकवर्ष भित्र २२८ वटा मुद्दा